Ogadentoday Press » DDS Innagaa leh aan ka illaashano Dhulbalaarsiga Iyo Aargoosiga!
OTP- Waxaa Jira oo caado dunnida ka ah dhulbalaarsiga Iyo Aargoosiga in baddan soo jiray soona jiri doona balse dadku waxay isku dhaafeen inay fahmaan xaqiiqda iyo dhibta ku imman karra. Haddii dadku fahmaan midaas waxay badbaadinayaan mustaqbalkooda iyo aayaha ummadooda.
Daris waxaa innoo ah 40 milyan oo caloosha ka aaminsan in aan nahay dad dayacan kuwaas mar walba damac ah dhulbalaarsiga ku jiro. Gumaysiga inta baddan qaar ayaa dunnida u shaqeeya taariikhda qortaa meesha kuwana aysan u shaqayn. inta baddan gumaysiga kuwa u shaqeeya marka danbe iyagaa diyaarad saarta oo meeshooda ku celiya maadaamo dakano ka galay dadkiisa halkaas ku baaba,aan!
Oromo waa qoomiyad inta baddan aa nahay isku dhaqan waxaana la innaga rabbaa inaan ku wadda noolaano nabbad iyo darisnimo wanaaggsan laakin haddii midaas fahmi waayaan xaqiiq waxaa ah in Oromo ku nooshahay, caloosheene, dhexdeena, hareeraheena.
Oromo waxay nagula joogtaa diinta, dhaqanka, magagaca, Xeryaha qaxootiga qaarbaa Soomaali isku dhiiba, haddaba hadii colaad iyo dhulbalaarsi ay gasho iyadaa mid ooga darran malahan waxaana qabbaa in Dr.Abiye uu midaas xaqiiqsado haddii midaas Oromo fahmi wayso hubaal waxaa ah in Qoomiyaha Itoobiya oo dhan meel uga soo wadda jeedsan doonaan! Dadkana waa inay xaqiiqda wajahaan haddii aad ka mid noqon iyaga oo aad dadkaaga ka tagi adaa xor ah!
Nabbad, Caddaalad Iyo Dimoqraadiyad ayaa lagu wadda noolaan karraa.